Xa i-Instagram iphakamisa abahlobo ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo
Julayi 26, 2019 0 IiCententarios 3615
Iingcebiso ku Instagram Zenye zezinto ezibonwa kakhulu kunxibelelwano lwasentlalweni. Kwaye, uhlala ujonge xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo. Nangona kunjalo, nangona inamanqaku ayo afanelekileyo, kuye kwakho nezikhalazo ezivela kubasebenzisi, njengoko ezi ngcebiso zibonakala zinomdla kwi-feed yenethiwekhi yoluntu.
Xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo, ikwenza ngokudibeneyo, apho isincomo singabonakali, kodwa siliqela ngexesha elinye; Ungayibona ngesihloko esithi "Ukucetyiselwe wena". Kutheni le isenzeka? Ilula xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo Ikwenza oko ngokunxulumene neeakhawunti onxibelelane nazo mva nje. Imicimbi oye wayisingatha ekunxibelelaneni kwakho ithathelwa ingqalelo. Ke, xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo Iya kuhlala isuselwa kwizihloko zakho ezinomdla.
I-Instagram ikucebisa nini ngabahlobo bakho: Fumana apha!
Eli nqaku eliphunyezwe yi-Instagram alifananga kunxibelelwano lwasentlalweni, kodwa liphethwe kumaqonga ahlukeneyo. Ngendlela efanayo, iyavakala ukuba bakhona, kuba kaloku yi-Instagram enye yeendlela zentlalo zokunxibelelana ngakumbi kwihlabathi; Kuyimfuneko ukuba iindlela zivele zokufumana iiakhawunti zomdla wakho omkhulu.
Ngoko ke, xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo isekwe kunxibelelwano lwakho. Ukuze ukwazi ukunxibelelana nabalandeli abanomdla kakhulu kwaye abaphathe izihloko ezifanayo onxibelelane ngazo. Kwimeko apho lo mboniso we-Instagram uyakukhathaza, kuya kufuneka ukhethe ukhetho "lokufihla" okanye "ukufihla" kwaye ukhethe ngokulandelelana.
Ngaba olu phawu luyasebenza?
Njengoko besitshilo ngaphambili, xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo Inxulumene nezihloko zakho ezinomdla. Nangona kunjalo, abahlali bephumelela kwezi ngcebiso, kuba abasebenzisi abaninzi baluncedo xa befumana abantu abanxulumene nabo. Ngendlela efanayo, ziya kubonakala rhoqo kwisondlo sakho, ke ukukhangela izihloko zakho ezinomdla kuya kuba lula.
Ngakolunye uhlangothi, oku akukoneli ngokupheleleyo kubasebenzisi abaninzi; Oku kukhethwa ukuba kungasebenzi neengcebiso okanye izindululo. Ngokubanzi, sisixhobo esiya kuba luncedo xa uthanda ukusebenzisana rhoqo kwinethiwekhi yoluntu. Ngalo, unokufumana ngokukhawuleza izihloko zakho ezinomdla, kunye nabantu obaziyo.
Imvelaphi yeengcebiso ze-Instagram?
Okwangoku, i-Instagram ithathwa njengenye yezona network zinkulu nezona zaziwayo kwihlabathi elinabantu abangaphezu kwe-1.000 yezigidi zabasebenzisi abasebenzayo. Yiyo loo nto kuye kwafuneka kuphunyezwe into eza kuvumela abasebenzisi ukuba bazifumane lula iiakhawunti. Konke oku ngokunxibelelana kwinethiwekhi yezentlalo, yenye yeenjini apho ilawulwa ngeqonga le-Instagram.
Kwenziwa njani oku? Ndiyabulela ukusebenza kwe-algorithm ye-Instagram. Ukusebenza kwayo kusekwe kwinto yokuba iyilelwe ukuze bonke abasebenzisi be-Instagram bakwazi ukuhlala benxibelelana kwaye baqhubeke nokusebenzisana rhoqo. Ezi ngcebiso zinokufumaneka kwakhona xa umntu etyelele iprofayile yakho, ngokubhekisele kubasebenzisi abalandela iakhawunti yakho okanye izihloko zakho ezinomdla. Zonke ezi ngcebiso zimiselwe koku kulandelayo:
Unxibelelwano kwinethiwekhi yoluntu, ngokuthanda kunye nezimvo.
Iimpawu kunye nentengiso yomdla wakho.
Uphendlo olwenzileyo, nokuthathela ingqalelo iicookies zokhangelo lwakho kuGoogle.
Iiprofayili ezingumxholo onxibelelana naye kwi-Instagram.
IiHashtags zomxholo ozijongayo.
Ukuthandwa kwabasebenzisi obalandelayo.
Icebisa ntoni i-Instagram?
Njengoko ufundile, xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo Thatha ingqalelo iintlobo ngeentlobo eza kukuvumela ukuba ufumane abantu abanomdla. Kwakhona, unokukonwabela eli nqaku rhoqo ngenxa yokubonisa kwalo ngokukhawuleza ukondla kwakho kwi-Instagram. Kwelinye icala, iqonga lihlala licebisa abasebenzisi abathile kunye neeakhawunti; Apha siza kubona bonke!
Ngoku, ngoku sibonile ukuba i-Instagram ihlala ihlaziya izixhobo zayo kunye nomsebenzi wayo. Olu hlaziyo luxhomekeke ikakhulu kuyilo lwe-Instagram, olujolise ekuchitheni ixesha elininzi kangangoko linokujonga izihloko ezinomdla. Kungenxa yoko le nto iingcebiso ezibonakala kuwe zinxulumene kakhulu nezihloko nabantu osoloko unxibelelana nabo.
Kwaye, abasebenzisi abaninzi bahlala bafuna ukwandisa ukuthandwa kwabo kwinethiwekhi yentlalo kwaye bafumane abalandeli abaninzi. Isekwe koku, ukuba iingcebiso ezikwi-Instagram zinenjongo ephambili, ukupapasha ii-akhawunti ezabelana ngezinto ezifanayo, ngaloo ndlela kwandisa unxibelelwano kwiqonga.
Ngokwesiqhelo, xa ungumsebenzisi omtsha kwi-Instagram kwaye ungenzi mapapasho, kunjalo xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo ngokuthe rhoqo. Ngokunjalo, abantu abatyelela iprofayile yakho baya kuba nakho ukujonga iingcebiso ezahlukeneyo kubantu abanokuthi bazi okanye banomdla wokuzilandela.
Kwelinye icala, sikwafumana ezinye iiprofayili ezibonisa ukuba u-Instagram ucebisile kwaye ezi zezabasebenzisi beakhawunti oyilandelayo. Ungakufumana oku, ezantsi kwegama leprofayile, kulapho uya kubona khona abafowunelwa abaqhelekileyo abanokuba nomdla kuwe.
Kwakhona, kwaye njengoko kulindeleke, i-Instagram iya kuhlala ikucebisa ukuba ulandele emva abasebenzisi abakulandelayo kwaye ungazange ulandele. Ngendlela efanayo, abantu abakhangele iprofayile yakho kwi-Instagram baya kungena phakathi kweengcebiso ezenziwa yinethiwekhi yoluntu.
Ngakolunye uhlangothi, uya kufumana ezinye iintlobo zeeprofayili eziza kuphakanyiswa ngu-Instagram. Olu nxibelelwano okanye amaqela onxibelelana nawo kwamanye amaqonga anjengoFacebook okanye i-Twitter. Uya kufumana neengcebiso kubalandeli babantu obalandelayo. Kwakhona, uya kubona iingcebiso kwisondlo sakho seakhawunti zonxibelelwano ozongeze kwi-smartphone yakho.
Okokugqibela, uya kufumana iiprofayili ezidumileyo, ezo ucebisa ngazo u-Instagram kuba, njengoko besesitshilo, ziiprofayili ezinabalandeli abaninzi kwaye ke i-Instagram translate ukuba ungathanda ukuzilandela.
I-Instagram ikucebisa nini ngabahlobo bakho: Amabali!
I-Instagram ibonakaliswa ngokuhlala uhlaziya rhoqo, uthatha imisebenzi emitsha kunye nezixhobo ezitsha mihla le; Enye yazo ngamabali e-Instagram. Ngoku, iingcebiso ze-Instagram aziboniswanga xa ubona amabali. Nangona kunjalo, i-algorithm yeqonga isasebenza apha, ihlela ngokubeka phambili amabali wabasebenzisi obahlala rhoqo okanye odibana rhoqo nabo.
Kuyahlekisa, kodwa kuyinyani. I-algorithm ye-Instagram isetyenziswa kwimisebenzi emininzi kunye nezixhobo zeqonga, amaNqaku elinye lawo. Ke ngoko, xa ubonakala phakathi kwabantu bokuqala kumabali omsebenzisi ongawaphindaphindiyo, uya kukwazi ukuba kuyasebenza kwaye ukujonga umxholo opapashiweyo.
Ngakolunye uhlangothi, iingcebiso ze-Instagram azithandwa ngabasebenzisi bonke. Ukuba le yimeko yakho, kunye neengcebiso zabantu abangazithandi ziyavela, ungasisombulula! Kuya kufuneka wenze kuphela imiyalelo ethile esiya kuyichaza kungekudala.
Unokuba nomdla: Ngubani onokubona amabali wam e-Instagram?
Susa iingcebiso ezingafunekiyo!
Njengoko besitshilo ngaphambili, xa i-Instagram iphakamisa wena zihlobo Ikwenza oko ngokusekelwe kubantu onxibelelana nabo uthathele ingqalelo izihloko zakho ezinomdla. Ukuba kunjalo, iingcebiso ze-Instagram zihlala ngokungathandi kwakho, kukho iindlela zokuzishenxisa ngokupheleleyo.
Ukuqala, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufumana iingcebiso ezikukhathazayo. Emva koko, kuya kufuneka ufikelele kukhangelo lwakho lwamva kwaye ujonge ukuba abo bantu bavela kuluhlu. Ukuba kunjalo, sicebisa ukuba uzicime. Emva koko, siya kuchaza inyathelo ngenyathelo, ukwenza inkqubo ibe lula:
Fikelela iakhawunti yakho ye-Instagram, kanye apho kuya kufuneka ukuba ukhangele i-icon enkulu yeglasi kwindawo yakho yesixhobo.
Emva koko, uluhlu luya kuvela lubonisa ukusebenzisana kwakho kunye nokukhangela.
Ukuba into oyifunayo kukuba icebiso leakhawunti lingabonakali kuwe, kuya kufuneka ucinezele u-X obekwe ngasekunene kweprofayile. Ngale ndlela, le ngcebiso iya kupheliswa ngokupheleleyo.
Ndikususa njani ukubonakala kweakhawunti yam?
Ngoku, ukuba into oyifunayo yeyokuba abanye abantu bangayiboni iprofayile yakho, kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yabo yomsebenzisi kwaye ufumane uphawu lwamanqaku amathathu; Ime kwikona ephezulu yephrofayili. Oku kuya kubonisa imenyu eza kukuvumela ukuba uvimbe iakhawunti yomsebenzisi, ususa ukufikelela kumabali akho kunye nokupapashwa.
Ngendlela efanayo, kukho enye into enokukhetha ongayisebenzisa xa ungafuni iprofayili yokujonga amabali akho. Le yi "Fihla imbali" kwaye ungayifumana kwindawo yeseto. Ngale ndlela, umsebenzisi unokuqhubeka nokubona into oyipapashayo kwisondlo sakho, kodwa ingeyiyo eyokwabelana ngamabali akho.
1 I-Instagram ikucebisa nini ngabahlobo bakho: Fumana apha!
1.1 Ngaba olu phawu luyasebenza?
2 Imvelaphi yeengcebiso ze-Instagram?
3 Icebisa ntoni i-Instagram?
3.1 Iiprofayile Ezicetyiswayo
4 I-Instagram ikucebisa nini ngabahlobo bakho: Amabali!
4.1 Susa iingcebiso ezingafunekiyo!
4.2 Ndikususa njani ukubonakala kweakhawunti yam?
Ithetha ukuthini i-Instagram
Yintoni i-Instagram kwaye isetyenziswa njani?